iPhone 5s - iPhone သတင်းများ | အိုင်ဖုန်းသတင်း
iPhone ကို 5s
El iPhone ကို 5s အဆိုပါဖြစ်ပါသည် XNUMXth မျိုးဆက် iPhone၂ နှစ်တစ်ကြိမ်တွင် "S" ပုံစံသည်ယခင်မော်ဒယ်၏တိုးတက်လာသောဗားရှင်းဖြစ်သည်။ ဒီကိစ္စမှာ iPhone5၏ဒီဇိုင်းကိုထိန်းသိမ်းသည် ဒါပေမယ့်အရောင်တွေကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်, အနက်ရောင်မော်ဒယ်ဖြစ်လာသည် အာကာသမီးခိုးရောင် (အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှယိုယွင်းပျက်စီးမှုကိုရှောင်ရှားရန်)၊ အဖြူရောင်မော်ဒယ်လ်သည်ဆက်လက်တည်ရှိပြီး iPhone အသစ်တစ်ခုသည်အရောင်တောက်ပလာသည် ဒိုရာဒို.
နှင့်အတူပထမဆုံးစမတ်ဖုန်း 64-bit ဗိသုကာ၎င်း၏ A7 ပရိုဆက်ဆာသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုလျှော့ချခြင်းမရှိဘဲစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။ ထို့အပြင်တစ် ဦး ပါဝင်သည် အသစ် coprocessor, M7ကျွန်ုပ်တို့၏လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ 5s သည်လက်ဗွေရာခံကိရိယာပါသောပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းလည်းဖြစ်သည်။ အက်ပဲလ်သည်ယနေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့သမျှတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
iPhone 5s တွင်ပါဝင်သည် ကင်မရာတိုးတက်မှုများနှေးနှေးဗီဒီယိုများ၊ burst mode နှင့်ညဘက်ဓါတ်ပုံများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့် LED နှစ်ခုဖြင့်တိုးတက်လာသော flash ကိုသုံးသည်။
၎င်း၏မျက်နှာပြင်4လက်မ, ၎င်း၏အထူ 0,76 စင်တီမီတာ အလေးချိန် ၁၁၂ ဂရမ်သာရှိပြီး၊ အားလုံးသည်ပလပ်စတစ်နည်းနည်းဖြင့်သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ထိုအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဖြင့်လိုက်ပါသွား iOS7operating system သစ်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် Apple သည်၎င်း၏စနစ်ကိုအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်းဖြင့်ရိုးရှင်းသော icon များနှင့်ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းများကိုရှာဖွေရာတွင်ထိုလက်တွေ့ကျပြီးအရောင်အသွေးစုံသည့်အသွင်အပြင်ကိုဆုံးရှုံးခြင်းဖြင့်အပြည့်အ ၀ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ဒီမှာကြည့်နိုင်တယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone 5s အပြည့်အစုံ.
iPhone 5s ကိုဗွီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ထိုအပေါငျးတို့သသတင်းများကိုမြင်လျှင်ပြီးအောင် iPhone 5s အင်္ဂါရပ်များဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အယ်ဒီတာအဖွဲ့မှပြုလုပ်သောဗွီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် ငါတို့က ပထမ ဦး ဆုံးရှိသည် စပိန်နိုင်ငံရှိအိုင်ဖုန်း 5s နှင့်သင်ပထမ ဦး ဆုံးပြောခဲ့တာက
iPhone 5s သတင်း
အောက်ဖော်ပြပါသတင်းများအရ 5s အကြောင်းသတင်းများကိုဒီဆိပ်ကမ်းပတ်ပတ်လည်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာအမြဲတမ်းသတိထားမိစေရန်
graphite iPhone 5s ရှေ့ပြေးပုံစံ၏ဓာတ်ပုံများပေါက်ကြားခဲ့သည်
por Tony Cortes လွန်ခဲ့တဲ့ 1 တစ်နှစ် .
Group FaceTime ခေါ်ဆိုမှုသည် iOS 12 သဟဇာတဖြစ်သော iPhone နှင့် iPads အားလုံးတွင်အလုပ်မလုပ်ပါ
por Ignatius ခန်းမ လွန်ခဲ့တဲ့4အနှစ် .
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Apple သည် iOS 12.1 ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။
Los Angeles ရဲ့ iPhone 5s ကိုသော့ဖွင့်လိုက်ပါ
iPhone 5s နှင့် iPhone SE တို့၏ကွာခြားချက်များ
လပေါင်းများစွာကောလာဟလများထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်တရားဝင်မဟုတ်သောအတည်ပြုချက်များအရ Apple သည်မနေ့ကနေ့လည်ခင်းတွင် iPhone SE ကိုတင်ဆက်ခဲ့သည်။
iPhone SE ပြီးနောက် iPhone 5s သည် Apple catalog မှပျောက်ကွယ်သွားသည်
por Juan Colilla လွန်ခဲ့တဲ့6အနှစ် .
နောက်ဆုံးအနေနဲ့နာမည်ကိုအတည်ပြုပေးလိုက်တဲ့ iPhone SE ကိုကျွန်တော်တို့ Cupertino ကနေသူတို့အထူး Edition အတွက်ရွေးလိုက်တာပါ။
Apple ကအိန္ဒိယမှာ iPhone 5s ကိုထက်ဝက်လျှော့ချလိုက်တယ်
အက်ပဲလ်လျင်မြန်စွာကျယ်ပြန့်စွာရောက်ရှိနေသည့်နိုင်ငံများတွင်တရုတ် မှလွဲ၍ အိန္ဒိယကိုလည်းတွေ့ရသည်။
Touch ID မြန်နှုန်းကို iPhone 5s,6နှင့် 6s နှိုင်းယှဉ်ခြင်း [video]
ပြီးခဲ့သည့်သောကြာနေ့၊ ၂၅ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချခဲ့သည့် iPhone 6s နှင့် iPhone 6s Plus …
Apple က iPhone 6, iPhone6Plus နှင့် iPhone 5s တို့၏ဈေးနှုန်းကိုလျှော့ချခဲ့သည်
သတင်းဆိုး။ ငါဒီဆောင်းပါး၏အဓိကအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သကဲ့သို့ငါပထမ ဦး ဆုံးကောင်းသောနှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်သို့ ...
သင့် iPhone6တွင် MLC သို့မဟုတ် TLC အမှတ်တရများရှိမရှိမည်သို့သိနိုင်သနည်း
por Nacho လွန်ခဲ့တဲ့ 8 အနှစ် .
အချို့သော iPhone6နှင့် iPhone6Plus တို့သည်စွမ်းဆောင်ရည် ၆၄ GB နှင့် ၁၂၈ GB ရှိသောပြproblemsနာများရှိနေသည်။
iPhone6၏အစိတ်အပိုင်းများသည်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိသည်
iPhone 200 တစ်ခုချင်းစီကိုထုတ်လုပ်ဖို့ဒေါ်လာ ၂၁၆ ဒေါ်လာကနေဒေါ်လာ ၂၀၀ အထိဒေါ်လာ ၂၄၇ ကြားကြားနိုင်တယ်။
iPhone 5s နှင့် iPhone 5c စျေးနှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်
iPhone6နှင့် iPhone6Plus တို့၏စျေးနှုန်းများကို၎င်းင်း၏အခမဲ့ mode နှင့်စပိန်နိုင်ငံများတွင်သိရှိပြီးဖြစ်သည်။